Toeram-pivarotana alina amin’ny Eid ao Isfahan / Te hanitsy ny vidiny ny olona – Mehr News Agency | Iran sy ny vaovao manerantany - adiet
Toeram-pivarotana alina amin’ny Eid ao Isfahan / Te hanitsy ny vidiny ny olona – Mehr News Agency | Iran sy ny vaovao manerantany
اسفند 27, 1400 از adiet
Mehr News Agency – Vondron’ny Faritany – Neda Sepahi: Isan-taona dia mampanantena ny hampihenana ny vidin’ny alin’ny Eid, indrindra ho an’ny sakafo, saingy tsy mitovy ny hevitry ny sasany momba ny zava-misy eny an-tsena.
Na teo aza ny fiveloman’ny fanjakana sy ny fandoavana ny karama sy ny fanampiana ho an’ny vahoaka sy ny mpiasa, ny mpiasa ary ny misotro ronono, dia noheverina ho nafana ny tsenan’ny Eid fara faharatsiny tamin’ny faran’ny taona, saingy tsy hita ny firoboroboan’ny taon-dasa. Etsy ankilany, ny fizarana entana amin’ny saram-panjakana sy mora kokoa noho ny fivarotana ao an-tanàna dia niteraka fahafaham-po amin’ny mpanjifa amin’ireo foibe ireo, anisan’izany ny fivarotana Kosar.
Tsy ampy ny karama sy ny karama
Saingy ny fanadihadian’ny mpanao gazety Mehr tany amin’ny tsena sy fivarotana isan-karazany tao Isfahan dia mampiseho fa ny vidin’ny entana fototra maro amin’ny alin’ny Eid, manomboka amin’ny voanjo sy ny zava-mamy ary ny voankazo hatramin’ny vary, ny akoho, ny trondro ary ny hena mena, dia avo be, ary toa misy ny fangatahana sasany. entana avy amin’ny vondrona sasany Nihena ny olona. Misy aza mijery fotsiny گر Ny vidiny dia miankina amin’ny mpividy.
Vehivavy 60 taona nijery vidin-javatra eny amin’ny fivarotana voanjo sy voankazo maina, izay milaza ny tenany ho vehivavy mpikarakara tokantrano, nilaza tamin’i Mehr fa mpitsabo mpanampy misotro ronono ao amin’ny hopitaly Isfahan ihany koa ny vadiny, manan-janaka dimy, ny roa manambady ary manan-janaka telo. zafikely.
Amin’ny filazana fa tsy mahafeno ny vola lany ny karaman’ny mpiasa sy ny mpiasa ary ny misotro ronono, dia mitaraina izy fa tsy ara-drariny ny karaman’ny misotro ronono sy ny fisotroan-dronono, ary nampiany hoe: “Amin’izao vidim-piainana sy ny fiakaran’ny vidim-piainana izao, tsy hitanay izay hovidiana, ary amin’ny ankilany, ny mpivady Andrasan’izy ireo amin’ny ray aman-dreniny ka tsy maintsy ataontsika mena ny tava amin’ny tehamaina, hoy ny fitenenana.
Mpiasa 38 taona i Sajjad ary manan-janaka roa. Is. Niakatra be ny vidin’ny voanjo sy ny turmeric, ary angamba taorian’ny roa taona nisian’ny fameperana ho an’ny taovam-pananahana, dia miatrika fameperana lafo vidy i Nowruz. famoriana های Manaova tsipika fianakaviana.
Nidina 40% ny fividianana voanjo
Ao amin’io rohy io ihany Alireza حِمَصیان “Tsy dia tsara loatra ny tamin’ity taona ity raha oharina tamin’ireo taona nandraisana ny tsenan’ny voanjo noho ny fiakaran’ny vidim-piainana, na koa angamba navelan’ny olona nandritra ny 90 minitra ny zavatra novidiny, ka tsy mahaliana ny tsenan’ny voanjo tamin’ity taona ity”, hoy ny sekreteran’ny Isfahan Bar. Hoy ny Association.
Nambarany koa fa nihena 40% eo ho eo ny tsena hividianana voanjo tamin’ity taona ity raha oharina tamin’ny taon-dasa, ka hoy izy: “Miankina amin’ny kalitao sy ny kalitaony ny vidin’ny voanjo, ary tsy raikitra ny vidiny, fa ny habetsahan’ny akora ao anatin’ny vidiny. mamaritra ny vidiny.”
Hoy hatrany ny sekreteran’ny Fikambanan’ny Sakafo sy Sakafo Isfahan: Miisa 150 ny voanjo manomboka amin’ny kilasy voalohany ka hatramin’ny fahatelo araka ny kalitaony, ary 150 ny vidin’ny voanjo mifangaro. arivo Tomana Hatramin’ny 200 arivo tomans ary ny ambaratonga voalohany dia napetraka ho 350 arivo tomans; Tsy dia raikitra loatra anefa ny vidin’ny voanjo ary miankina amin’ny akora azo ampiakarina na mampihena ny vidiny, ohatra, ny vidin’ny voanjo dia 400.000 hatramin’ny 430.000 tomana no ambony kokoa, arakaraka ny kalitao sy ny akora.
Nomarihin’i Homsian fa niresaka momba ny vidin’entana ihany koa ny olona momba ny sendika sy ny efitranon’ny guild. Mikasika ny fanaraha-maso ny vidiny sy ny fivarotana antsinjarany ny voanjo sy voankazo maina, dia nanamarika izy fa “miaraka amin’ny fifandaminana eo amin’ny sampan-draharahan’ny sendikà sy ny sendikà ary ny manam-pahaizana momba ny sendikà, misy fanaraha-maso sy fisafoana ny tsena.” Manombana sy mifehy ny vidiny izy ireo.
Be voankazo amin’ny alin’ny Eid; Kely ny fahefa-mividin’ny olona
Ary koa, Mohammad Sadegh Riahi, filoha lefitry ny Sendikan’ny tsenan’ny voankazo sy legioma ao Isfahan, dia nilaza tamin’i Mehr fa betsaka ny voankazo ary tsy misy olana amin’ny famatsiana azy ireo, ny fitaterana sy ny fikojakojana azy.
Nohamafisiny fa tsy olana ny tsenam-boankazo raha oharina amin’ny entana hafa ary betsaka, nomarihiny fa ambany ny fahefa-mividin’ny vahoaka amin’ity taona ity ary tsy toy ny tamin’ny taon-dasa ny fahatongavan’ny olom-pirenena nividy voankazo betsaka. Tamin’ny taon-dasa dia nisy olana teny amin’ny kianjan’ny fifamoivoizana noho ny fahamaroan’ny mpitsidika nanomboka ny 16 martsa teo, saingy tamin’ity taona ity dia tsy misy olana amin’ny fifamoivoizana.
Ny filoha lefitry ny Sendikan’ny tsenan’ny Voankazo sy Legioma Isfahan, izay nanamarika fa ny salan’isan’ny voankazo dia manana mpanjifa bebe kokoa, dia nanampy hoe: “Ny enta-mavesatry ny voankazo be dia be no vidian’ny olona iray, izay eo amin’ny 10 ka hatramin’ny 20%, fa ny voankazo lehibe indrindra. mpanjifa no vidiny antonony.” می خرند.
Nanampy i Riahi hoe: Noho izany ny hazo paoma antonony ao amin’ny sahan’ny voankazo Tareh Bar ao Isfahan Ny kilao Tomana valo arivo ka hatramin’ny 12-13 arivo tomana ary voasary hatramin’ny valo arivo ka hatramin’ny 10 isaky ny kilao arivo Tomana Fa ny vidin’ny voankazo lafo vidy sy avo lenta ho an’ny hazo paoma dia 16 arivo Tomans isaky ny kilao ary voasary 13-14 arivo Tomans.
Hoy koa izy: “Raha noheverina ho mitsikera sy mikorontana ny tsenan’akondro amin’ny alin’ny Eid, nefa tsy misy olana manokana, ary izao ny kilaon’ny akondro indianina iray dia mitentina 24.000 Tomana ary 30.000 Tomans eny an-kianja ny Ekoatoriana sy Filipina.
Manompo ny tanimbary Isfahan ho an’ny mponina ao Isfahan mandritra ny fialantsasatry ny Nowruz
Hoy ny filoha lefitry ny sendikàn’ny tsenan’ny voankazo sy legioma ao Isfahan: “Misy amin’ireo mpaninjara no tena manao ny rariny ary mivarotra araka ny tombom-barotra sy ny isan-jato napetraky ny sendikà amin’ny varotra, saingy indrisy fa misy amin’izy ireo no tsy manaraka ny isan-jato napetraka ka mivarotra. amin’ny vidiny lafo.” Misy ihany koa ireo mpivarotra, noho ny fahavitsian’ny fahefa-mividin’ny olom-pirenena, ka voatery nampihena ny tombom-barotra mba tsy ho latsaka eo an-tanany sy tsy ho simba ny entana.
Nanampy i Riahi fa araka ny latabatry ny sendikan’ny mpivarotra voankazo sy anana dia mahazo mivarotra voasary sy paoma hatrany amin’ny 25 isan-jato ny mpivarotra ary avo 15 isan-jato ny akondro noho ny vidin’ny tsena.
Nanampy izy hoe: “Tsy mihidy ny kianjan’ny Tareh Bar Fruit Square mandritra ny Nowruz ary vonona ny hanome serivisy, ary amin’ity taona ity, ho an’ny fahasalaman’ny olom-pireneny, ny Tareh Bar Fruit Square ao Isfahan dia hanolotra voankazo mivantana ho an’ny olom-pirenena ihany koa.”
Famatsiana voankazo amin’ny Eid miaraka amin’ny taham-pifehezana ny tsena amin’ny tranoheva 220 ao amin’ny faritanin’i Isfahan
Mikasika izany, Mohsen Haj Abedi, talen’ny Fikambanana Koperativa ambanivohitra ao amin’ny Faritanin’i Isfahan, dia nanambara fa hozaraina amin’ny toeram-pivarotana 220 ao amin’ny faritany ny paoma sy voasary amin’ny tahan’ny fankatoavan’ny lalàna mifehy ny tsena, ary nilaza tamin’i Mehr hoe: Trano heva ao an-tanànan’i Isfahan ary trano heva 160 ao amin’ny tanànan’ny faritany no manolotra fitsipika momba ny tsenan’ny voankazo.
Nanampy izy hoe: Tamin’ity taona ity, ny drafitra hifehezana ny tsenan’ny voankazo amin’ny alin’ny Eid sy Nowruz 1401 dia notehirizin’ny Organisation Operational Rural Cooperative, ary voasary Thomson North 2,550 taonina sy paoma Semirom 1,225 taonina no voatahiry tao anaty fitoeran-drano mangatsiaka valo tao. ny faritany.
Manampy izany ny talen’ny fikambanana kaoperativa ambanivohitra ao amin’ny Faritanin’i Isfahan: Ny tahan’ny fankatoavan’ny fanaraha-maso ny tsena Ny kilao Thomson North Orange dia 8.500 Tomans ary Semirom Apple Tree dia 9.500 Tomans ho an’ny mpanjifa ary azon’ny besinimaro.
Haj Abedi dia nanamarika: Ny vokatry ny fanaraha-maso ny tsena dia atolotra any amin’ny foibe 35, foibe 16 amin’ny fivarotana Kowsar ary foibe kaoperativa mpiasa fito ao Isfahan, raha toa ka voafaritra ny foibe famatsiana any amin’ireo tanàna.
Ny fanadihadian’ny mpanao gazety Mehr momba ny fivarotana akoho sy atody maromaro any avaratr’i Isfahan dia mampiseho fa tao anatin’ny roa andro dia tsy nozaraina tamin’ny sasany tamin’ireo fivarotana ireo ny henan’akoho ary banga ny talantalana, ary noho izany antony izany dia nivarotra akoho tamin’ny fivarotana iray ny fivarotana sasany. vidiny maimaim-poana 35 kg. Nivarotra tomanina arivo izy ireo.
Ny henan’akoho misy eny amin’ny tsenan’i Isfahan dia avy amin’ny fanjakana ary tohanan’ny fanjakana
Amin’io lafiny io, hoy i Hossein Irandoost, lefitry ny talen’ny fanatsarana ny famokarana biby fiompy ao amin’ny Jihad Agricultural Organization ary mpitondra tenin’ny vondrona miasa ao amin’ny foiben’ny fifehezana ny tsenan’ny faritanin’i Isfahan, dia nilaza tamin’i Mehr hoe: “Ny akoho avy amin’ny governemanta ao amin’ny trano famonoana ao Isfahan dia manana vidiny nankatoavina ary tsy manaiky na iza na iza izahay. milaza fa tsy misy akohom-panjakana ary mivarotra akoho malalaka; Ny akoho rehetra eny an-tsena dia omena fanampiana.
Nampiany ihany koa fa amidy amin’ny vidiny 29.500 Tomans ny akoho Isfahan.
Nanamarika ny lefitry ny Organisation Agricole Isfahan Jihad misahana ny fanatsarana ny famokarana biby fiompy sady mpitondra tenin’ny foiben-toeran’ny fandrindrana ny tsenam-paritany : Hatramin’ny telo andro lasa izay dia navelanay ny fanondranana henan’akoho tany ivelan’ny faritany satria nisy ny ambim-bava ka tsy azo nalaina tao anatin’ny faritany, saingy izahay tsy namela izany telo andro lasa izay.Ny akoho rehetra vokarina any amin’ny faritany dia atolotra ao amin’ny faritany ihany. Na dia omaly aza dia tsy nanome alalana hamono akoho ho an’ny orinasa mpanohana ny fiompiana, satria raha jerena fa ny alin’ny Eid ary ny Isfahan dia mandray ihany koa. Nowruz mpandeha, ny akoho vokatra rehetra dia tsy maintsy atolotra eny an-tsenan’ny faritany.Afaka mividy soa aman-tsara.
Irandoost, izay milaza fa tsy misy ahiahy amin’ny famatsiana henan’akoho eny an-tsena, dia miteny hoe: Amin’izao fotoana izao, ny fizarana ny akoho velona any amin’ny toeram-pamonoana ary avy eo ny fizarana azy any amin’ny fivarotana akoho sy atody ao amin’ny rafitra. mpitarika Vita izany, saingy tsy omena ny kaodim-pirenena intsony ny mpanjifa, ary afaka mividy akoho araka izay ilainy ny mpanjifa.
Nomarihiny fa ny Isfahan no laharana voalohany amin’ny famokarana atody eto an-toerana ary avo roa heny amin’izao fotoana izao ny filan’ny famokarana izay aondrana any amin’ny faritany hafa, hoy ihany izy: “Isan’ny taona iray ity taona ity amin’ny famatsiana voankazo sy kojakoja proteinina ary ny entana fototra indrindra. eo amin’ny fambolena.” Mampiavaka izany satria amin’ity taona ity ny fahamaroan’ny entana sy ny fanaraha-maso ny vidiny dia tena azo antoka tokoa ao amin’ny faritany.
Ny minisitry ny lefitry ny Faritany Isfahan misahana ny fanatsarana ny famokarana biby fiompy koa dia manondro ny rafitra fanasokajiana omby mena, hoy izy: Ity drafitra ity dia tapa-kevitra sy ambara mifototra amin’ny kalitaon’ny hena amin’ny kilasy voalohany, faharoa ary fahatelo, mifototra amin’ny vidin’ny iray kilao ny zanak’ondry kilasy voalohany. miaraka amin’ny rambo Garm 150 dia tomans 160 arivo, izay vidiny manokana ho an’ny tanànan’i Isfahan sy ambony. an-keriny Any amin’ny tanàn-dehibe hafa ao amin’ny faritany, ny henan’omby dia atolotra amin’ny vidiny mora kokoa.
Varotra lafo indrindra amin’ny fanitsakitsahana sendikaly Isfahan
Araka ny filazan’i Mehr, mifototra amin’ny fanapahan-kevitry ny vondrona miasa ao amin’ny Foiben’ny Fitantanana ny tsenan’ny Faritanin’i Isfahan, dia nanapa-kevitra ny hanamafy ny fanaraha-maso amin’ny andro farany amin’ny taona sy ny tsena amin’ny alina, ary ny fisavana ireo guild mandritra ny alina ao Isfahan sy ny faritany.
Araka ny nambaran’i Akbar Adel Maram, lefitry ny inspektera lefitry ny indostrian’ny indostria, ny harena ankibon’ny tany ary ny varotra ao amin’ny faritanin’i Isfahan, tamin’ny fivoriana farany nataon’ny vondrona miasa ao amin’ny foiben’ny fanaraha-maso ny tsena ao amin’ity faritany ity, ny mponina ao Isfahan tamin’ny 14 ka hatramin’ny 24 martsa tamin’ity taona ity dia 1.481. fotoana miaraka amin’ny rafitra fanaraha-maso 124 Mangina Nifandray izy ireo fa ny tena fangatahan’izy ireo dia momba ny vidiny sy ny tatitra lafo vidy.
Ary koa, araka ny fisafoana ny guild faritany, ny ankamaroan’ny fanitsakitsahana ny tsena an-keriny Ny tsy fampidirana ny vidin-javatra, ny tsy fandefasana faktiora, ny fivarotana ambany sy ny hosoka ary ny tsy fanarahana ny fenitra ara-pahasalamana dia ao anatin’ny laharan’ny fandikan-dalàna manaraka.
انقلاب اسلامی ایران غیر زمینی ترین گام در داخل تسریع فرج امام زمان (عج) است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان
نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل ابزار زیبایی شناختی اربعین 1401 – خبرگزاری مهر داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان